विवाह बन्धनमा बाँधिइन् नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मलाला, को हुन् उनका पति, के गर्छन ? — Sanchar Kendra
विवाह बन्धनमा बाँधिइन् नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मलाला, को हुन् उनका पति, के गर्छन ?
एजेन्सी । नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला युसुफजाईले मंगलबार आसिर मलिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध गाँसेको घोषणा गरेकी छन्। बालिकाहरूको शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्दै आएकी मलालाले आफ्नो आधिकारिक ट्विटरमार्फत् बेलायतको बर्मिङ्घमस्थित घरमा आसिरसँग मुस्लिम परम्पराअनुसार ‘निकाह’ गरेको घोषणा गरेकी हुन्।
आफ्नो जिन्दगीको महत्वपूर्ण क्षण सार्वजनिक गर्दै २४ वर्षीया मलालाले नेपाली समयअनुसार मंगलबार राति ११ बजेर २८ मिनेटमा ट्वीटरमा लेखेकी छन्- ‘आजको दिन मेरो जिन्दगीको अमूल्य दिन हो। आसिर र म आजबाट जीवनसाथीका रूपमा जिन्दगी बिताउँदैछौं। हामीले बर्मिङ्घमस्थित घरमा परिवारका सदस्यहरूमाझ सानो निकाह आयोजना गर्यौं। हामीलाई तपाईंहरूको शुभकामनाको खाँचो छ। जिन्दगीको आगामी यात्रा सँगसँगै हिँड्न लागेकामा हामी उत्साहित छौं।’
मलालाले आफ्नो श्रीमानबारे थप जानकारी उल्लेख गरेकी छैनन्। तर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले उनका श्रीमान आसिर को हुन् भन्नेबारे उल्लेख गरेका छन्। द न्यूयोर्क टाइम्सका अनुसार आसिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डमा म्यानेजर छन्। आसिरको लिंक्डइन प्रोफाइलमा पनि यही विवरण उल्लेख भएको टाइम्सले लेखेको छ।
आसिरले सन् २०१२ मा पाकिस्तानको लाहोर युनिभर्सिटी अफ म्यानेजमेन्ट साइन्सेसबाट अर्थशास्त्र र राजनीतिशास्त्रमा स्नातक गरेका हुन्। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डमा आवद्ध भएको भने सन् २०२० मेदेखि हो। उनले पाकिस्तान सुपर लिगको फ्रेन्चाइज मुल्तान सुल्तान्समा पनि अपरेसनल म्यानेजरका रूपमा काम गरेका थिए।
उनको पाकिस्तानमै एउटा लिग फ्रेन्चाइज पनि छ जसको नाम लास्ट म्यान स्ट्यान्ड्स हो। आसिरले आफ्नो प्रोफाइलमा उल्लेख गरेअनुसार उनले तल्लो तहमा भएको क्रिकेटको क्षमतालाई संस्थागत र व्यवस्थित बनाउन यो लिग बनाएका हुन्।
आसिर विभिन्न नाटकहरूमा पनि आवद्ध भएको बताइएको छ। भारतीय सञ्चारमाध्यम डिएनएका अनुसार उनी नाटक निर्माण गर्ने ड्रामालाइन नामको संस्थाका अध्यक्ष थिए।
मलाला युसुफजाईको जन्म पाकिस्तानमा भएको थियो। उनलाई सन् २०१२ मा बालिकाहरूको शिक्षा पाउने हकबारे बोलेको भन्दै तालिबान आतंकवादीहरूले गोली हानेका थिए। त्यति बेला उनी ११ वर्षकी थिइन्। उनले भनेकी थिइन्, ‘यहाँ छोरी जन्मिनुलाई सधैं उत्सवका रूपमा लिइँदैन।’
उनलाई त्यसपछि बर्मिङ्घमको अस्पताल लगिएको थियो। उनले त्यहीँ बसेर बालिका शिक्षा क्षेत्रमा वकालत गर्दै आएकी छन्। कयौं महिनाको शल्यक्रिया र पुनर्स्थापनापछि सन् २०१४ मा उनी बेलायतको नयाँ घरमा आफ्नो परिवारसँग बस्न थालेकी थिइन्। आफ्नाो बुवाको सहयोगमा उनले मलाला कोष स्थापना गरिन् जसले बालिका शिक्षामा सहयोग गर्दै आएको छ।
कम उमेरमै बालिका शिक्षा क्षेत्रमा काम गरेबापत् उनको योगदानको कदर गर्दै सन् २०१४ डिसेम्बरमा मलालालाई नोबेल शान्ति पुरस्कार दिइएको थियो। उनी सबभन्दा कम उमेरकी नोबेल विजेता हुन्। उनले बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयबाट सन् २०२० मा दर्शन, राजनीति र अर्थशास्त्रमा ग्र्याजुएट गरेकी थिइन्।
आसिर र मलालाको भेट कहिले भएको थियो भन्ने यकिन छैन। तर सन् २०१९ मा आसिरले सार्वजनिक गरेको एक फोटोमा मलाला पनि सँगै देखिएकी छन्। बर्मिङ्घमको एक स्टेडियममा भएको क्रिकेट प्रतियोगितामा मलाला र आसिर एउटा सामूहिक फोटोमा सँगै देखिएका हुन्।
मलाला र आसिरको बिहेको खबर सार्वजनिक भएलगत्तै सामाजिक सञ्जालमा उनीहरूलाई संसारभरबाट बधाइ दिनेको ओइरो नै लागेको छ। युवा वातावरण अभियन्ता ग्रेटा थनवर्गदेखि अभिनेत्री प्रियंका चोपडासम्मले उनीहरू शुभकामना दिएका छन्। त्यस्तै बिल-मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेसनकी मेलिन्डा गेट्स र क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडिउले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत् उनीहरूलाई बधाइ र शुभकामना दिएका छन्।